सुदूरपश्चिमका ६ मन्त्रीसहित ७ जनालाई पार्टीबाट निष्काशन गर्न सिफारिस सुदूरपश्चिमका ६ मन्त्रीसहित ७ जनालाई पार्टीबाट निष्काशन गर्न सिफारिस
काठमाडौं । नेकपा एमालेले पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकले गरेको निर्णय विपरीत सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा गएका ६ जना मन्त्रीसहित एक प्रदेशसभा सदस्यलाई कारबाहीको सिफारिस गरेको छ । एमाले प्रदेश कमिटीले स्पष्टीकरण सोधे पनि जवाफ नआएपछि सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारका ३ जना मन्त्री र ३ राज्यमन्त्री तथा प्रदेशसभा संसदीय दलका सचेतक दुर्गाकुमारी कामीलाई आवश्यक कारबाहीका लागि पार्टी केन्द्रमा सिफारिस गरिएको हो ।
मन्त्रीहरुलाई थप मन्त्रालयको जिम्मेवारी, कसले कुन पाए ?
‘महाभारतमा धृतराष्ट्रमा पुत्र मोह देखिएजस्तै राष्ट्रपति भण्डारीमा ओलीमोह देखियो’
‘१४९ जनाकै हस्ताक्षर गरेर दाबी गरेपछि को चाहिन्छ ? देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरियोस्’